आखिर यो कसले दियो मोदीलाई यो रातो ज्याकेट ? जनता जान्न चाहान्छ ?? – tvNEPALI
आखिर यो कसले दियो मोदीलाई यो रातो ज्याकेट ? जनता जान्न चाहान्छ ??
Posted on २ जेष्ठ २०७५, बुधबार १०:११ May 16, 2018
काठमाडौं, २ जेठ – सोमबार राति बसेको क्याबिनेट बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको ब्रिफिङ निकै रोचक थियो । स्रोतका अनुसार भारतीय पाहुना नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणबारे मन्त्रीहरुलाई जाकारी गराउँदै उहाँले भन्नुभयो ‘वान् टु वान् वार्ता र अन्य प्रसंगसँगमा पनि हामी त सानो देश भन्दै हिन्नताबोध प्रकट गर्दा ‘कहाँ त्यस्तो हो’ भन्न थालिएको छ ।’
प्रधानमन्त्रीका अनुसार यो, भारतबाट भारतभन्दा नेपालले नै बढी फाइदा लिएको देखिएको छ । ओलीले अगाडि भन्नुभयो, ‘यसबीच, हाम्रैतर्फबाट (२ नम्बर प्रदेशमा) केही हर्कत भए बरु । पहिले नेपाललाई हेर्न भारतीय दष्टिकोण माथिदेखि तलैसम्म हेपाहा खालको हुन्थ्यो । तर अहिले राजनीतिक नेतृत्वमा त्यस्तो छैन । बरु कर्मचारीतन्त्र र एजेन्सीको तहमा ‘चाँही केही तुष र कस बाँकी छ ।’
क्याबिनेट ब्रिफिङमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिहरुलाई सोध्नुभयो – के तपाईहरुले याद गर्नुभयो, भारतीय पाहुना कालो कुर्ता पाइजाम पहिरी त्यसमाथि सल ओडेर मुक्तिनाथ जानुभयो तर पूजा गर्दा र फर्कदा भने रातो ज्याकेटमा हुनुहुन्थयो । त्यो कसरी भयो ? उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो, ‘दिल्लीको गर्मीबाट आउँदा जाडोबारे त्यति ध्यान नपुग्न सक्छ । तसर्थ पाहुनालाई चिसो नलागोस् भनेर मैलै नै त्यसको इन्तजाम गरिदिउको हुँ । उहाँले नेपालको तर्फबाट स–साना कुरा पनि मिहिन पारामा उठाइएको जानकारी दिनुभयो । जनआस्थामा खबर छ।
Posted in राजनीति, समाचार Tagged मोदी, रातो ज्याकेट
अब मराठी फिल्म काम गर्ने : चर्चित बलिउड अभिनेत्री प्रियंका चौपडा